I-Succulent yoPhawu lwakho lweZodiac-Izityalo eziLungela uphawu lwakho lweenkwenkwezi - Indlela Yokuphila
I-Succulent yoPhawu lwakho lweZodiac-Izityalo eziLungela uphawu lwakho lweenkwenkwezi
I-Zen RialImifanekiso kaGetty
Unokucinga ngokuzenzekelayo ukuba ungaphezulu kwe- ihlengethwa esimnandi , bunny esimnandi , okanye panda uhlobo lomntu, kodwa ngokuka-Paula Pavlova, umseki-kunye we Inyanga yeBox (ikiti yenyanga yobhaliso lwempilo esekwe kumjikelo wakho wenyanga), uphawu lwakho lwe-zodiac lunokuthetha into eyahlukileyo. Ngokwenene. Kuxhomekeka kusuku lwakho lokuzalwa, kukho, enyanisweni, into entle efanelekileyo kuwe. Jonga ukuba yeyiphi into entle uPaula athi ilungele uphawu lwakho (kwaye ngoba):
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi1 I-Aries: I-Red Echeveria Agavoides 'iLipstick' izulu13Imifanekiso kaGetty
Ngokuqinisekileyo ii-Aries luphawu lomlilo olupakisha ipunch enkulu! Ihlala ishukuma, ihamba, isenza, kwaye iyila, le sunburst incinci imele amandla amakhulu kwaye aphilileyo akhutshwa yiAries. '
Mbini ITaurus: IAeonium Arboreum 'iZwartkop' UAndrew WaughImifanekiso kaGetty
Ngokwendalo isiseko sayo kwaye sinomonde omangalisayo, esi simnandi sinokukhula sibe ziimitha ezi-6 ubude phantsi kweemeko ezifanelekileyo-ixesha, umhlaba ozinzileyo, kunye notshintsho oluncinci kwindalo esingqongileyo. ITaurus, njengophawu lomhlaba oluzinzileyo, ayikuthandi ukutshintsha, ukutsho nje okuncinci — isenza esi sityalo someleleyo similise iingcambu kunye nentle sibe sisiphelo esifanelekileyo sophawu. '
3 Umhlaza: Sedum 'Purpurteppich' kazakovmaksimImifanekiso kaGetty
'Amandla eGemini ayatyatyamba, anomoya, kwaye anomoya wokutsala, etsala wonke umntu obonayo. Le ntyatyambo intyatyambo iquka loo mgangatho emagqabini ayo akhula phezulu kuphela ukuveza intyatyambo entle engenakumelana nayo. '
ngaba impahla abazalwana amawele
4 Umhlaza: Agave Americana IVictoria Bee PhotographyImifanekiso kaGetty
'Ikhaya yindawo ethandwa kakhulu yiCancer kwaye esi sityalo likhaya kwisiqu eside esihle esivelela kuphela phantsi kwezona meko zilungileyo-phantse yonke iminyaka engama-40!'
5 U-Leo: UDelosperma Nubigenum 'Utyalo loMkhenkce oMthubi' NNehringImifanekiso kaGetty
'I-Leos yaziwa ngokuma kweempawu ezibenza babe yinkokeli yokuzalwa yendalo, besasaza ulwazi kunye novuyo kuyo yonke indawo abaya kuyo. Ezi ntyatyambo zimthubi zizisa ukukhanya okufanayo kwigadi yakho okanye kwikhaya lakho, zidala umoya wethemba ngombala wazo omthubi — njengokukhanya kwelanga, iplanethi elawula lo mqondiso. '
6 Intombi: Crassula Ovata 'Jade' lwenzak6Imifanekiso kaGetty
'IVirgo yeyona nto iphambili' uMphilisi woMhlaba, 'evumelanisa yonke indalo kunye neempawu zayo zokukhulisa, kanye njengale ikhula ngokukhawuleza inencasa exhasa iintlobo ezininzi zobomi ngaphakathi nangapha kwayo ngamagqabi namasebe.
7 ILibra: ICrassula Rupestris x eQhekekileyo 'Umgexo womntwana' IAmazon
ILibra luphawu lokulingana kunye nobunye, kwaye ngokukhethekileyo ukhetha ukulandelelana, ulungelelwaniso, kunye nokungaguquguquki. Le ncasa imila ngendlela eyiyo yejiyometri njengoko ikhula kuwo onke amacala inemilo enye etshintshayo, iphindaphindeka — kanye njengokuba iLibra ikuthanda njalo! '
8 IScorpio: INeohenricia Sibbettii Etsy / CactiMarket
Lo mnandi ulunge kakhulu wedwa kwaye akuthandi ukukhanya okuninzi, njengesidalwa esihlala emqolombeni iScorpio. Xa kunikwa isithuba sokuba zezabo, iiScorpios zihlala zifumana indlela yokuqhakaza! '
9 Umtoli uSedum 'Autumn Joy' I-BSIPImifanekiso kaGetty
'Buzele luvuyo nobomi, ezi ntyatyambo ziqaqambileyo zifana neSagittarius-umoya okhululekileyo ozelwe ngokutsha! I-Sagittarius isoloko ingowokuqala ukutsiba kwi-adventure kwaye ivuselele uvuyo kuthi sonke, kwaye ngubani ongaziva mnandi xa ekufutshane nale ntyatyambo ineentlobo ezininzi ?! '
10 ICapricorn: Sedum Morganianum ‘Umsila Wedonki’ I-DEA / C. UDANIImifanekiso kaGetty
ICapricorn ithembekile kwaye iyahambelana. Esi sigqubuthelo sikhula ngokukhawuleza emhlabeni sesityalo sinokukhula kuwo onke amacala ngokuthembekileyo, sibonisa iimpawu ezizinzileyo zolu phawu luqinisekileyo. '
Shumi elinanye U-Aquarius: USenecio Radicans Glauca ‘Umtya weeBhanana’ Etsy / ExoticSucculent
'Ukuya nokutya okuziinkozo yitalente yokuqala ka-Aquarius, uhlala ucinga ngeendlela ezintsha nezikrelekrele zokufikelela kwizinto-ezinje ngesityalo esimnandi esijingayo esikhula sijongise ezantsi!'
12 Iipisces: uSenecio Mandraliscae 'Izinti zeBlue Chalk' IAmazon
'Umbala omfusa, oluhlaza okwesibhakabhaka, kwaye okhula kakhulu njengamanzi angaphantsi kwamanzi, le ndawo imnandi yeyona ndawo intle yePisces ephilayo.'
UTaylor Mead UTaylor ngumbhali ozimeleyo, umhleli, kunye nomphathi wemidiya yoluntu ngobuhle, impilo entle, kunye neempawu zokuphila kunye neempapasho.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io Intengiso-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi
igumbi lokuhlala iitafile zekofu
umculo wokucoca igumbi lakho